वाइफाइ राउटर कति सुरक्षित ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
वाइफाइ राउटर कति सुरक्षित ?
धेरै जसोको युजरनेम ‘एडमिन’ हुन्छ र पासवर्ड कि त ‘पासवर्ड’ नै लेखिएको हुन्छ वा ‘१२३४’ । यदि यस्तो युजरनेम र पासवर्ड छ भने तपाईंको राउटर सधैं असुरक्षित हुन्छ ।
असार ९, २०७५ द न्यूयोर्क टाइम्स
काठमाडौँ — हामीले नयाँ वाइफाइ राउटर किन्दा कहिले पनि शक्तिशाली नेटवर्क सुरक्षाबारे ध्यान दिँदैनौं । खासगरी घरमा जोड्ने राउटर भनेपछि हामी केवल त्यसको स्पिड र कभर गर्ने एरियाका बारेमात्रै ध्यान दिन्छौं ।अब भने हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ ।
नेटवर्क सुरक्षा शक्तिशाली हुन किन जरुरी छ भने त्यो नै हाम्रो इन्टरनेटमा प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार हो । यदि सुरक्षा प्रणाली राम्रो नभएकै कारण राउटरमा नचाहिंँदो सफ्टवेयरले प्रवेश पायो भने हाम्रो मोबाइल फोन, कम्प्युटर, स्मार्ट वाच, टिभी लगायतका घरेलु उपकरणहरू त्यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् ।
अहिलेको अवस्थामा साइबर थ्रेटबाट बच्नका लागि आफूले प्रयोग गर्ने नेटवर्क सुरक्षित हुन अत्यन्तै जरुरी भएको छ । गत महिना सिस्कोको थ्रेट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विभाग, टालोसले एफबीआईसँगको सहकार्यमा गरेको छानबिनमा सयौंको संख्यामा नेटगार, टीपी लिंक र लिंकसिसका वाइफाइ राउटरहरूमा ‘मालवेयर सफ्टवेयर’ (ह्याकरहरूले बनाएको सफ्टवेयर जसको सहयोगमा उनीहरूले हाम्रो मोबाइल, ल्यापटप लगायतको वस्तुमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न सक्छन्) भेट्टायो । उक्त मालवेयरहरूको सम्बन्ध रसियनहरूसँग रहेको देखिएको थियो । यसै महिना टालोसले नै बताए अनुसार समस्या पूर्व प्राप्त सूचनाभन्दा पनि गम्भीर देखिएको छ । किनभने माथि उल्लेखित ब्रान्डका राउटरमात्र नभई असुस र डी लिंकका राउटरहरू पनि संक्रमित भएका छन् ।
यसको अर्थ के हो भने बजारमा नामी भनिएका सबै ब्रान्डका राउटरहरू निसाना बनाइएको छ । ‘भीपीएन फिल्टर’ नामक यो मालवेयरले हामीले प्रयोग गर्ने वेबसाइटबारे सम्पूर्ण जानकारी ह्याकहरूलाई दिन्छ । यसैको मद्दतबाट ह्याकरहरूले नक्कली बैंकिङ साइट कम्प्युटरको ब्राउजरमा खोलिदिन्छन् र हाम्रो पासवर्डसहित खाताको सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त गर्छन् र एकाउन्ट रित्याइदिन्छन् । यसै प्रकारले इमेलको पनि पासवर्ड प्राप्त गरी हाम्रो सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् ।
नेटगार, डी लिंक र लिंकसिसले नयाँ सुरक्षा अपडेट ल्याई आफ्ना ग्राहकहरूलाई राउटरलाई अपडेट गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै राउटरको युजरनेम र पासवर्ड पनि शक्तिशाली राख्न सुझाव दिएका छन् । टीपी लिंक र असुसले भने यसबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
राउटरलाई सुरक्षित बनाउने सरल उपाय भनेको त्यसको समय समयमा ‘फ्रिमवेयर’ (उक्त राउटर चलाउनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर) लाई अपडेट गरिरहनु हो, त्यसरी नै जसरी हामी हाम्रो मोबाइललाई अप–टु–डेट राख्न अपडेटहरू गरिरहन्छौं । यद्यपि सन् २०१४ मा एक आईटी कम्पनीले गरेको सर्वेक्षण ३२ प्रतिशत अमेरिकीलाई मात्र आफ्नो राउटरहरूको फ्रिमवेयर अपडेट गर्न आउने देखिएको थियो ।
सयम–समयमा फ्रिमवेयर अपडेट गर्ने यहाँ राउटरको फ्रिमवेयर अपडेट कसरी गर्ने भनेर बताइएको छ ।
-सुरुमा त्यो राउटरको इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल हेरेर त्यसको आईपी एड्रेस पत्ता लगाउने । त्यो आईपी एड्रेसलाई इन्टरनेट ब्राउजरको वेबसाइट खोल्ने स्थानमा लेख्ने । यसरी हामी राउटरको वेब ड्यासबोर्डमा पुग्छौं ।
-उक्त ड्यासबोर्डमा युजरनेम र पासवर्ड राखेर खोल्ने । त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरिसकेपछि फ्रिमवेयर सेटिङ्समा जाने र नयाँ फ्रिमवेयरको खोजीका लागि भनेर राखिएको बटनलाई क्लिक गर्ने ।
-यदि उक्त राउटर बनाउने कम्पनीले नयाँ अपडेट दिएको छ भने त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने र राउटरलाई रि–स्टार्ट गर्ने । यही प्रक्रियालाई हरेक ३ देखि ६ महिनामा पुन: दोहोर्‍याउने ।
-राउटरको युजरनेम र पासवर्ड नौलो प्रकारको राख्ने ।
जब हामी माथि उल्लेखित विधिबाट राउटरको ड्यासबोर्डमा राउटरको युजरनेम र पासवर्ड हाल्ने स्थानमा पुग्छौं, धेरै जसोको युजरनेम ‘एडमिन’ हुन्छ र पासवर्ड कित ‘पासवर्ड’ नै लेखिएको हुन्छ वा ‘१२३४’ । यदि यस्तो युजरनेम र पासवर्ड छ भने तपाईंको राउटर सधैं असुरक्षित हुन्छ ।
किनभने यस्तो युजरनेम र पासवर्ड भएका राउटरको कभरेज एरियामा पर्ने जोकोहीले पनि सजिलै त्यसमा प्रवेश गरेर सेटिङ्सहरू परिवर्तन गरिदिन सक्छ र त्यसलाई अन्यत्रबाट पनि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने बनाइदिन सक्छ ।
-आफ्नो राउटरलाई केही वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गर्ने ।
राउटरले राम्रोसँग काम गरिरहे पनि त्यसलाई केही वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन गर्नु राम्रो र सुरक्षित हुन्छ । कम्पनीले समय–समयमा निकाल्ने अपडेटहरू सबै राउटरका लागि हुन्छन् भन्ने केही जरुरी छैन । केही समय पहिलाका राउटरहरूका लागि उत्पादकहरूले अपडेटहरू नबनाउने हुँदा समय–समयमा राउटर फेर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।
राउटर फेर्ने बेला भयो कि भएन भनेर थाह पाउन उक्त राउटर कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ । यदि कम्पनीले गएको वर्षदेखि नै फ्रिमवेयर अपडेट प्रदान गरेको छैन भने उक्त मोडलको राउटर कम्पनीले बनाउन बन्द गर्‍यो भन्ने बुझिन्छ । अब त्यस राउटरलाई परिवर्तन गर्नु नै सुरक्षित हुन्छ ।
हामी यो अवस्था आइपुग्नुको प्रमुख कारण भनेको सुरुमा उत्पादकहरूले राउटर बनाउँदा नै उनीहरूले ‘ओपन सोर्स सफ्टवेयर’ प्रयोग गरे, जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन लागतमा कमी आयो । तर उनीहरूले त्यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई भने ख्याल गर्न सकेनन् । त्यसैले सबैभन्दा सजिलो भनेको यदि अब तपाईंको राउटर परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ भने स्मार्ट राउटर प्रयोग गर्नुस् । त्यसले आफूले आफैंलाई अपडेट गरिरहन्छ र प्रयोग गर्न पनि अन्यको तुलनामा निकै सहज हुन्छ ।
ब्रायन एक्स चेन
द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित
प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०८:०४
दुई खुट्टा भाँचिएको अर्जेन्टिना
ब्राजिलमा भएको विश्वकपपछि अर्जेन्टिनाले तीन प्रशिक्षक फेरिसकेको छ । दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा पनि अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेको थिएन ।
असार ९, २०७५ न्यूयोर्क टाइम्स
निझ्नी नोभ्गोरोड — पक्कै पनि अर्जेन्टिनाका लागि यो भन्दा खराब त अरू हुनै सक्दैन । विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेल सानो न सानो आइसल्यान्डविरुद्ध थियो । त्यसमा टिमका कप्तान र स्टार खेलाडी लियोनल मेसी पेनाल्टीबाट गोल गर्न चुके, नतिजा अर्जेन्टिना बराबरीमा रोकियो । बिहीबार राति सन् २०१४ को उपविजेताका लागि अझ खराब भयो, साँच्चै धेरै खराब ।
आइसल्यान्डविरुद्धको खेलमा बेहोरको निराशापछि अर्जेन्टिनाले क्रोएसियाविरुद्ध अझ बिर्सनलायक खेल प्रदर्शन गर्‍यो । अब अर्जेन्टिना ३–० को दर्दनाक हारपछि प्रतियोगिताबाटै बाहिरिने खतरामा पुगेको छ । प्रशिक्षक जोर्गे साम्पोलीले खराब लयमा रहेको टिममा जादु छर्दै नाइजेरियाविरुद्ध समूह ‘डी’ को खेलमा जित दिलाए पनि त्यो नपुग हुन सक्छ । अर्जेन्टिनी भाग्य अब आफ्नोमा मात्र होइन, अरूमा निर्भर हुनेछ ।
अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा पुग्ने हो भने समूहको अरू खेलको नतिजा उसको अनुकूल हुनुपर्छ । कार्ल माक्र्स सडक र निझ्नी नोभ्गोरोड रंगशालामा रहेका अर्जेन्टिनी समर्थकलाई आफ्नो टिमको कमजोरीबारे बुझ्न धेरै समय लागेन । आइसल्यान्डविरुद्ध देखिएको समस्या खासमा एक खेलको मात्र थिएन । यसले त पूरा टिमलाई धमिराको पाराले खाइरहेको रहेछ ।
कमजोरी कहाँबाट मात्र सुरु गर्ने ? साम्पोलीको डिफेन्समा ठूलो प्वाल जस्तै देखिन्थ्यो । त्यसैलाई चिर्दै ५३ औं मिनेटमा अर्जेन्टिनी टिममाथि ठूलो विपत्ति आइपुग्यो । गोलरक्षक विल्फ्रेड काबालेरोले क्रोएसियाका एन्टे रेबिचलाई पहिलो गोलको उपहार थिए । त्यसको ठीकविपरीत छेउ, मेसी मैदान होइन, कतै पार्कमा घुमिरहेका जस्ता देखिन्थे, जबकि पूरा टिम उनमै निर्भर थियो ।
पहिलो एक घण्टाको खेलमा मेसीले खालि १५ पास मात्र खेले । खेलको अन्त्यमा त काबालेरोले नै बढी पास खेले, ३६, जबकि मेसीले ३१ पास मात्र खेले । ‘जुन प्रकारले क्रोएसियाले हामीमाथि पहिलो गोल गर्‍यो, हामी मानसिक रूपमा टुट्यौं,’ निराश र स्तब्ध देखिएका साम्पोलीले भने । क्रोएसियाले लिएको अग्रता वास्तवमै विश्वास गर्न योग्य थिएन ।
काबालेरो तीनै गोलरक्षक हुन्, जसकै कारण आइसल्यान्डले एक गोल फर्काएको थियो । क्रोएसियाविरुद्ध त उनले बेतुकको ‘चिप्ड–पास’ खेले र बल सिधै रेबिचसम्म पुगेको थियो । रेबिच पनि के कमका थिए, त्यसमा आकर्षक ‘भली’ प्रहार गर्दै बललाई पोस्टको दिशा दिए, नजिकको दूरीबाट । खासमा काबालेरोको भूलले सम्भव यस गोल अगाडि क्रोएसिया ब्राजिलको तुलनामा बढी आक्रामक देखिएको थियो ।
फेरि क्रोएसियाको डिफेन्सले मेसीलाई निकै च्यापेको थियो, हलचल नै हुन नदिने किसिमले । बार्सिलोनाका लागि त मेसी हुँदै नभएको स्थितिमा पनि अवसर सिर्जना गर्न माहिर छन्, त्यो निर्णायक ढंगले । तर क्रोएसियाविरुद्ध उनी फिटिक्कै चलेको देखिएन । निराश मेसी कि त टाउको हल्लाएर निराशा पोखिरहेका थिए, कि त आफ्नो आकाशे र सेतो धर्सो–धर्सो भएको जर्सीसँग मेल नखाने गरेर दाह्री सुमसुम्याइरहेका थिए ।
निराश अर्जेन्टिनी समर्थक
‘हामीले मेसीलाई पास नै दिन सकेनौं,’ साम्पोलीले पनि माने । क्रोएसियाली कप्तान लुका मोड्रिचले पनि पछि भने, टिमको रणनीति नै थियो, मेसीलाई चुपचाप शान्त राख्ने । बरु मोड्रिच आपैंm भने निकै सक्रिय रहे र ८० औं मिनेटमा सुन्दर गोल गरे । यो त्यस्तै गोल थियो, जुन प्राय: अरू बेला मेसीले गर्ने गर्छन् ।
मोड्रिचले पेनाल्टी एरिया छेउ पाएको बललाई दुई ‘टच’ दिए । अनि बललाई घुमाउने बाटो देखाउँदै जाली चुमाए । बल यसरी घुमेर आएको थियो कि काबालेरोले त्यसलाई छुन मात्र सके । यो गोलले खेलको नतिजा तय जस्तै गरिसकेको थियो । तर खेलमा अझै समय बाँकी थियो, फेरि एकपल्ट अर्जेन्टिनी कमजोर डिफेन्सको वास्तविक चरित्र देखाउने । यसपल्ट गोल गर्ने पालो मेसीका बार्सिलानाका साथी खेलाडी इभान राकिटिचको थियो ।
यसअघि उनको फ्रि–किक पोस्टमा ठोकिएको थियो । तर तेस्रो गोलका लागि भने उनलाई सामान्य प्रहार नै पर्याप्त रह्यो, माटेओ कोभाचिचको पासमा, त्यो पनि नजिकको दूरीबाट । यो जित कस्तो रह्यो भने अब क्रोएसियाले विश्वकपको नकआउट चरण प्रवेश लगभग निश्चित जस्तै मान्न सक्छ । अर्जेन्टिनाको स्थिति भने यसको ठीक उल्टो ।
यहाँनेर केहीले मेसीको खराब प्रदर्शनसँग उनको समकालीन प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग दाँज्न पनि भुलेनन् । पोर्चुगाली रोनाल्डो भने खुबै लयमा देखिएका छन् । सायद मेसीको काँधमा चार करोड अर्जेन्टिनी फुटबलप्रेमीको विश्वासको वजन धेरै भयो कि ? रोनाल्डोले त दुई खेलमा चार गोल गरिसकेका छन् । जहाँ रोनाल्डोको अनुहारमा खुसी देखिएको छ, त्यहीं मेसीको अनुहारमा पीडा ।
अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक जोर्गे साम्पाओली
बिहीबारको खेलपछि शिर झुकाएर मेसी यसरी रंगशालाको ‘टनल’ बाट हराए कि धेरैले चालै पाएनन् । साम्पोलीले विश्वकप अगाडि मेसीलाई भगवान्कै रूपमा चित्रण गरेका थिए, मेसीलाई ‘सुपरम्यान’ जस्तै भएको दाबी पनि गरे । तर दुई खराब खेल, सबै तहसनहस भएको छ । धेरैले अर्जेन्टिनाको खराब प्रदर्शन पछाडि दोष जति सारा मेसीलाई नै दिन थालेका पनि छन् ।
निराश मुद्रामा अर्जेन्टिनाका खेलाडी
तर प्रशिक्षक भन्छन्, ‘अहिले यी दुई महान् खेलाडीको तुलना गर्ने समय भएको छैन । सत्य के हो भने अर्जेन्टिनी टिम खालि मेसीकै खेलमा टिकेको थियो । मेसी यसपल्ट निराश किन पनि हुनुपर्‍यो भने उनलाई साथ दिने टिम पछाडि थिएन ।’ खासमा अर्जेन्टिनी फुटबललाई जसले नजिकबाट हेरिरहेको छ, अहिलेको असफलता अनौठो पनि त होइन ।
ब्राजिलमा भएको विश्वकपछि अर्जेन्टिनाले तीन प्रशिक्षक फेरिसकेको छ । दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा पनि अर्जेन्टिनाको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेको थिएन । अन्तिम मोडमा त हो, अर्जेन्टिना भाग्यले रुसका लागि छनोट हुन सकेको । फेरि अर्जेन्टिनाको फुटबल संघ मात्र कहाँ ठीक स्थितिमा छ र ? अहिले त्यो संघ एकपछि अर्को काण्डबीच आपतकालीन व्यवस्थापनमा चलिरहेको छ, फिफाको निर्देशनअनुसार ।
क्रोएसियाका खेलाडी खुसी साट्दै
जर्जी सिगनेटी ५९ वर्षका भए, उनी मेसीलाई खुबै मन पराउँछन् । उनले तीन विश्वकप भयो, आफ्नो देशको टिमको प्रदर्शन हेरेको । उनी भन्छन्, ‘एउटा टेबलमा चार खुट्टा हुन्छ । यी चारै खुट्टा मेसीको हुन सक्दैन । अर्जेन्टिना दुई खुट्टा भाँचिएको टिम हो ।’ साम्पोलीले पनि खेलपछि निराश हुँदै भनिसकेका छन्, ‘अर्जेन्टिनी फुटबलका समर्थक हो, मलाई माफ गरिदेऊ ।’
तारिक पान्जा र जाेएल पिटरसन्स
तस्बिरहरू : एपी/रोयटर्स
प्रकाशित : असार ९, २०७५ ०७:५६